ATN: October 2010
ငါတို့ ရင်ဘတ်ပေါ်က အလံ
အသက်၊ သွေး၊ ချွေးများ..
ငါတို့ ရင်ဘတ် အပေါ်မှာ အလကားမတ်တင်း...
လွှင့်ထူခွင့် အလျဉ်း မရှိစေရ...
(အ၀ါရောင် ဆိုတာကတော့ -
ဘာသာရယ်... သာသနာရယ်... ထွန်းမည်...)
အနှစ် နှစ်ဆယ်.. သုံးဆယ်... လေးဆယ်... ငါးဆယ်...
(အစိမ်းရောင် ဆိုတာကတော့ -
စပါး၊ ဆန်၊ ရေ၊ အထွေထွေ ရတနာ ပေါမည်...)
(အနီရောင် မြင်သူ့အသည်းမှာ -
ရဲစိတ် ရဲမာန် ထက်သန်ရမည်... )
အလောင်းတွေကျန်မှပဲ ပြောရတော့မလား... နှင်း...
ခွပ်ဒေါင်း အလံ အဟောင်းအမြင်းလေးကို လွှင့်တင်...
ကောင်း သတင်းလေးတွေကို... ချစ်ခင်...
ဆောင်း သီချင်းတေးတွေကိုပဲ... ဟစ်ချင်... နေ... တော့... တယ်...
ဘဝတသက်တာ သောက်ဖော်သောက်ဖက်များ အားလုံးသို့
အနှစ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လုံးလုံး ကြိုးစားခဲ့တာက အရာမထင်ဘူး ဒီနေ့တော့
တကယ် မူးဘို့ကောင်းပြီ ဒီလောက်ဆို နေ့လည်ကတည်းက စ အားထုတ်ရတယ်
ရေခဲလုံလောက်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ် နေအပူဒဏ်ကို အဝတ်တွေ နဲ့ကာကွယ်တယ်
စိတ်အပူကိုတော့ ရူးသလို ပေါသလိုလုပ်နေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်တယ်
မှောင်အောင်စောင့်တယ် ခွက်ပုန်းသမားတယောက်ပီပီ ကျီးကန်းတောင်းမှောက်
ကြွက်လိုလှစ်ကနဲ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဆွဲကာ အခန်းထဲပြန်ဝင်တယ်
သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာချတယ် ခွမ် လို့ ပုလင်းခတ်သံ ၂ ခါတိတိမြည်တယ်
မလိုအပ်ပဲ ချွတ်နင်းနေတဲ့ ဟိုလူ (ဟိုလူ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောတာ)
အမြည်းထည့်ဘို့ခွက်(ပန်းကန်) ကို ဇံရွေးနေသေးတယ်
ဆည်မြောင်းချောင်းကန် ပြည့်လျှံတိုးအောင် မိုးလုံးပုလဲအလှ ရွာစေချင်ပေ…
စောင်းဦးဘသန်းလက်သံ တေးစာသားကို ကြားယောင်မိ (တူတွေ ဘယ်ပျောက်နေလဲ)
နောက်ခွက်တွေ ငှဲ့တဲ့အခါ ဝေလ်ပါဝါ သုံးပြီး ‘ဒီတခွက် မူးရမယ် မူးကိုမူးရမယ်’ အမိန့်ပေးတယ်
လက်မတုန်ပဲ လောင်းထည့်တယ် အမြှုပ်ကလေး မဆိုစလောက် ထ တယ်
ပြောပြီးပါပကောလား သျှတ္တရကျမ်းနဲ့ မညီတဲ့အတွက် လှတယ်လို့ မပြောဝံ့ဘူးဗျ သေမလောက်
ကြောက်တယ် ဒီသေရည်သေရက်ကို လုပ်ကောင်းတယ်လို့မထင်တာကြာပြီ ထုံ့ပိုင်း
Tract 06 ပြန်စတယ် စာသားတော့ဖမ်းမရဘူး ‘တယ့်နယ် တူနယ် ဗျောင်’ တော့ပါတယ်
မူးချင်တာအဓိကဝါဒ ဒါ ဘယ်ဝါဒရဲ့လက်အောက်ခံမှ မဟုတ်ဘူး ရိုးသားတယ် ပွင့်လင်းတယ် ကိုယ်ပိုင်
ဟန်ရှိတယ် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးက ၁၅ ကျပ်သားလောက်ပဲပါတယ် မူးခဲ့ပေါင်းများလှပြီ ဒီညလောက်
အလိမ္မာဖက်နေတာမျိုး ‘ကြုံ..ကြုံဖူးပေါင်’ ဘယ့်နှယ် မူးစေတတ်တဲ့အရာ ပါးစပ်ထဲအကြိုက်လောင်းထည့်
နေတာတောင် မမူးဘူးလို့ မမူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ဟေ့ကောင်(ဟေ့ကောင်ဆိုတာလဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတာပဲ) ဥာဏ်ကလေး တထွာတမိုက်နဲ့ စောက်နက်ဆန်ကော ယောင်မဆောင်နဲ့ ဒါတွေ
ငါတို့က ဖြစ်သွားတာ ခပ်တည်တည်ဖြဲလိုက်တာပဲ ချာတိတ်တွေက ဘယ်ဖြုံမလဲဒီလောက်နဲ့ကပ်သီး
ကပ်သပ် ငါက ဘယ်အရေခွံကို ခြုံရမှာတဲ့တုန်း မနောက်နဲ့ ကိုယ့်လူ ဘလာတွေ ဘလပ်တာ နူးတာမျိုးတော့
လာရှိုးမနေနဲ့တော့ မင့် ဝင်းဒိုး မင်း ခိုင်အောင်လုပ်ထား ဗိုင်းရပ်စ် နိုင်အောင်သတ်ထား ငါမူးပြီးမှဆို ပြောရဆိုရ ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး မူးပဲ မမူးနိုင်ဘူး ဒီသောက်အရက်ကလဲ အဲလေ မသောက်လို့ ဝါးပြီး
မြိုချရတဲ့ အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ ။
၅၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၂၁း၀၁ နာရီ
ဘလော့တွေ လျှောက် မလည်နိုင်တာ မလည်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ။ အချိန်မရတာ အလုပ်များတာနဲ့ ဂူးဂဲလ် ရီဒါထဲကသာ ဘလော့တွေကို ထိုင်ဖတ်ဖြစ်နေတော့သည်။ ကိုယ်ဖတ်နေကျ ဘလော့တွေကလည်း ရာကျော်အောင် များမှများ ဆိုတော့ကာ ခုနေအခါမှာတော့ ဘယ်ဘလော့ကိုမှ တိုက်ရိုက်သွား မဖတ်ဖြစ်တော့။ (ဒါပေသည့် နေ့တိုင်း ဖွင့်ဖတ်ဖြစ်သည့် ဘလော့ တခုတော့ ရှိနေပါသေးသည်။ ဘယ်ဘလော့ပါလိမ့်-ဟု စပ်စုချင်သူများ အီးမေးလ်မှတဆင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်...း)
ဖတ်နေကျ ဘလော့တွေထဲမှာမှ သိပ်ကြိုက်လွန်းသည့် ပို့စ်တွေရှိသည့် ဘလော့တွေမှာတောင် ကွန်မန့်ရေးချင်လာမှသာ ထိုဘလော့တွေအထိ ရောက်အောင် သွားဖြစ်တော့သည်။ အချိန် မရသည့်အတွက် ကိုယ့် ဘလော့မှာ ရေးလာသည့် ကွန်မန့်တွေကိုပင် ပြန် မရေးနိုင် စီပုံးက စာတွေကို မပြန်နိုင်ဖြစ်နေတာကလည်း ကြာလှပြီ။ သည်လိုနဲ့ ဘလော့ ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ ကိုယ်က မယဉ်ကျေးသလို ဖြစ်နေလေတော့သည်။ မတတ်နိုင်။ နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သူများ နားလည် ခွင့်လွှတ်ကြပါလိမ့်မည်။
သို့သော်လည်း ဘလော့ ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ ချစ်စရာ ကောင်းသည့် အလေ့အထလေးများကတော့ ရှိနေဆဲပါပေ။ Tag Game များ... ဖြင့်... ဘလော်ဂါ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုကြသည့် ပျော်ရွှင်စရာ ပို့စ်ကလေးများ။ ဘလော်ဂိုစဖီးယားထဲသို့ မယောင်မလည် (သို့မဟုတ်) မလည်သယောင်ဖြင့် အူကြောင်ကြောင် ၀င်ရောက်လာသော ဘလော်ဂါ အသစ်စက်စက်ကလေးများကို ဘလော်ဂိုစဖီးယား တခုလုံးဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းများ... (သို့မဟုတ်) မေတ္တာဖြင့် အခမဲ့ ကြော်ငြာဝင်ပေးခြင်းများ... စသည်... စသည်...
လိုရင်းတွေကို... တိုရှင်းစေရလျင်ဖြင့် ....
ဤစာသည် ဘလော့ အသစ်စက်စက်ကလေး တခုကို မေတ္တာဖြင့် အခမဲ့ ကြော်ငြာဝင်ဖို့ရာ... ပလ္လင် ခံနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း...
မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့် ဘလော့လေး၏ အမည်က
တတ်နိုင်သလောက် ကြည်လင်ချမ်းမြေ့စွာနေချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်
ကြည်ကြည်လို့အမည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
ကြည်နူးချစ်ခွင့်... ပေးပြီလား... အရှင်ရယ်...
ခြေက... တခြားဖက်... သွားနေချိန်တောင်...
ရင်က... အမြဲတမ်းပဲ... အိမ်ပြန်နေ...
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့... အတိတ်နှောင်ကြိုး... ချည်ဖွဲ့လို့... မရုန်းနိုင်ပြီ...
တဖန်ပြန်ပြီးတော့... သခင်ရဲ့အပါး... အခစားအရောက်... တခေါက်လာမယ်...
ဘယ်လိုလဲ... ဟင်... ...
ပြာတွေ... ဖြစ်ချင့်... ဖြစ်ပါစေ့... တချက်ကလေးပဲ... ကြည့်နိုင်ရင်...
သူန်မှုန်မျက်နှာ... အလိုမကျဟန်... နှုတ်ခမ်းစူပုံ... မျက်စောင်းတွေရယ်...
လွန်တဲ့အပြစ်အတွက်... အချစ်... ဒဏ်ခတ်ပေး...
၀ိညာဉ်... လိပ်ပြာ... စတေးခံမယ်... ကျေနပ်မှု... ရှိပါစေ...
ပြန်လည်ပြီးတော့... သခင့်နှလုံးသား... သော့ကလေး... တချက်... ဖွင့်ပေးပါနော်...
From Infinite down to the last Relapse album he's still shit'n
This fucking black cloud still follow's me around
ကောင်းကင်ရဲ့ အလင်း (ဆောင်းဦးလှိုင်)
တလောကလုံးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်... ကိုယ်အချစ်ဆုံးက မင်းလေး...
ရှေ့မှာ... ဘာတွေဖြစ်မလဲ... မစဉ်းစားဘူး...
မင်းလက်တွဲပြီး... သွားမယ်... ဒါ... ကံကောင်းခြင်းလို့ပဲ... မှတ်ယူ...
ဘာတွေ... လိုအပ်ဦးမလဲ... ချစ်သူရယ်...
တကယ်ဆို... ငါ... မင်း မရှိရင်... မဖြစ်တာပါ...
အချိန်တွေတိုင်းမှာ... မင်းက လိုအပ်လို့...
အမှောင်တွေ... ဖယ်... လမ်းပြပါ... အလင်းရောင်ရယ်...
ကိုယ်ဟာ... ကယ်တင်ဖို့ လိုပါတယ်...
မင်း မရှိရင်... မဖြစ်တာပါ...
မင်းလက်တွဲပြီး... သွားချင်တယ်... ဒါ... ကံကောင်းခြင်းလို့ပဲ... မှတ်ယူ...
A note4my Big Brother
This isacomment that I left on my beloved Big Brother's latest post upon his health situation.
I just want to share this comment to my blog-readers who may have visit his blog (http://penai22.blogspot.com)
As soon as you read this post, please go to his blog and put some encouragement to make his day.
I know you are now sitting at your computer desk
...reading the comments on your latest post on your monitor's screen. But I
can't tell exactly how many more days you will do this. And I am sure
that you even don't know that too. Actually, nobody knows that. And if
someone (likeaphysician oraspecialist of something) says off exactly
how many days you can do, I won't believe it. And believe me you will
live longer than what they say. In my belief, you will always be still
sitting at your table and writingapost that makes everybody have fun
and laugh forever by sharing your precious experience. Everyone
(including me) loves every of your posts. We all love your openness on
all of your posts. And your honesty and sincerity. Your humorous mind
and thoughts. We all have laugh along with every sentence of your funny
posts and we love you more. And love more of your upcoming posts. He who
makes everybody laugh hasalong life. I believe the laughter is the
best medicine and the one who formulate that medicine is you. So you are
the long-life-fun-maker. Let's have some fun, make everybody have fun... I know you can do it...You are the MASTER, my big brother...
October 9, 2010 10:30 PM